Richard Myo Thant - Page2of6- Third Eye For Third Door
416 Pageviews ဒါပေမယ့် ရက်စက်မိုက်မဲတဲ့ရှိုးဂန်းလက်ထက်မှာ တတိုင်းပြည်လုံးကြိမ်မီးအုံးသလိုဖြစ်နေတယ်။ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဟာ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာကြတဲ့အတွက် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာပုန်ကုန်ထကြွကုန်ပြီ။ဆန်ချီရိုနယ်မှာလည်းပုန်ကုန်ထကြွမှု မကြုံစဖူးဖြစ်တဲ့အတွက် ရှိုးဂန်းရဲ့ခေါ်ယူကြိမ်းမောင်းခြင်းခံရတယ်။ သူဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ နယ်တစ်နယ်ကိုစားရတဲ့ နယ်စားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက သူ့နယ်မှာတော့သူဟာ ဘုရင်ပဲ။ ဆန်ချီရိုဟာ သူ့ဇက်နဲ့ဝမ်းဗိုက်ကိုသူ မကြာခဏပြန်ပြန်ပြီးစမ်းကြည့်မိတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ယခုပုန်ကန်ထကြွမှုကိုအပြတ်နှိမ်နင်းနိုင်မှ ခေါင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့မြဲမယ်။ မနှိမ်နင်းနိုင်လို့ကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုဗိုက်ဖွင့်ပြီး ဟီရကိရိလုပ်ရင်လုပ်၊ ရှိုးဂန်းဒေါသထွက်လွန်းရင် ဟီရကိရိလုပ်ခွင့်တောင်မရရင်ပဲ ဇက်ကိုပိုင်းပြီးစီရင်ခံရနိုင်သေးတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဆန်ချီရိုရဲ့ဇက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ အထုပ်ကြီးကအလေးကြီးဖြစ်နေတယ်။ သူ့အနေအထားက အချိန်မရွေးဇက်ပြုတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထား။ […]
380 Pageviews Written by Joe Eifert Dear facebook Fuck you! I never fully trusted you, but now the bucket is full and I stop to be your money pig. You createdasocial platform and turned it into an ads platform. When you first went public in 2012, my data was worth around 100$ (that’sa[…]